लौ अचम्म ! उदयपुरको लाफागाउँमा अदृष्य रुपमा ढुंगा खस्छ (भिडियो रिपोट सहित) – Himal FM 90.2 MHz
लौ अचम्म ! उदयपुरको लाफागाउँमा अदृष्य रुपमा ढुंगा खस्छ (भिडियो रिपोट सहित)
फरक विश्व Author August 12, 2016
एउटा अचम्मको घटना तर वास्तविक, पुर्वी नेपालको उदयपुरको लाफागाउँ १ पाकाना तुम्छी गाउँको राई वस्तिमा अदृश्य रुपमा ढुंगा खस्न थालेपछि गाउँ नै त्रासमा छ ।
तपाईले आकाशवाट असिनासम्म झरेको देख्नु भएको छ, ढुंगा नै खस्ने गरेको देख्न त के सुन्न समेत पाउनुभएको छैन् होला तर पुर्वी नेपालको उदयपुर जिल्लाको उत्तरी गाविस लाफागाउँमा आकाशवाट ढुंगा निरन्तर खस्न थालेपछि स्थानीयमा त्रास फैलिएको छ ।
लाफागाउँको वडा नं १ मा रहेको जनकमणी राईको घर र संगै रहेको उनको दाजुभाईको घरमा अदृष्य रुपमा आकाशवाट ढुंगा खस्ने गरेको हो । खस्दै गरेको नदेखिएपनि सोझो रुपमा भुईमा खसेपछि देखिने भएकाले आकाशवाट खसेको अनुमान लगाईने गरेको छ ।
असारमा एक पटक ढुंगा खसेपछि राँको र बन्दुक सहित गाउँ चाहरेका गाउँलेहरु केहि नभेटेपछि सेलाएका थिए तर फेरी साउन २ गते ढुंगा खसेको र गएको आईतबार देखि ढुंगा खस्ने कार्यले निरन्तरता पाएको छ ।
अचम्मको महसुस भएपछि जनकमणी राईका परिवारका सदस्य त्रास खेपिरहेका छन् । जुन घरमा बढि ढुंगा बर्सिरहेकोछ, त्यस घरमा शुशिल र सपना राईको परिवार वस्दै आएका थिए । पारिवारिक स्रोतका अनुसार सो घरमा २०६९ साल अघि जनकमणीकै जेठा छोरा केदार राई बस्थे । भारतको कोईला कम्पनीमा काम गर्ने केदार अपांग भएपछि नेपाल आएर अहिले शुशिल र सपनाका परिवार वस्ने घरमा बसेका थिए । उनको २०६९ साल चैत्र २१ गते सोहि घरमा मृत्यू भएको परिवारले जनाएको छ ।
बसिरहेको स्थानमा बढिमा ५ किलोसम्मको ढुंगा खस्न थालेपछि गाउँनै शशंकित बनेका छन् । केहि दिन अघि मात्र जनकमणीको बाँया तर्फको कानमा ढुंगा लागेको थियो, जुन अहिले सम्म दुखिरहेको स्वयम् उनी उताउछन् । त्यस्तै, जनकमणीकै कान्छी बुहारीको पनि कानमा ढुंगाले लाग्दा झमझमाउन छाडेको छैन् । त्यस्तै, लगातार ढुंगा खसिरहेपछि घरभित्र पसेर रिसाएर, कराएर फर्किएका कान्छाभाईको घर पुग्दा घरभित्रको चुलो भत्किएको र वरिपरी औजार प्रयोग गरि खनिएको अनौठो दृष्य देखिएको गाउँले बताउछन् । सुकाईएको र घरभित्र राखिएको लत्ताकपडा समेत हराएको तर खोज्दै जादा घर नजिकको पोखरीमा डुवाईराखेको अवस्थामा भेटिनुले उनीहरुमा शंकाको खाडल झन् ठुलो भएको छ ।
पछिल्लो घटनालाई हेर्ने हो भने साँझमा बसिरहेकी शुशिल राईको सालीलाई ढुंगाले लाग्दा वेहोस भई ढलेको र रगत छादेको दृश्यले अझ अचम्म तुल्याएको छ । उनको आखाँ खुलेपनि पहिलेकै अवस्था फर्किन सकेकी छैनन् ।
अपत्यारिलो तर तथ्य सहितको लाफागाउँको यो घटनाले चकित बनाएको छ । टिप्पणी गर्नेहरुले यस्ता घटना संखुवासभा, खोटाङ, ललितपुर लगायतका जिल्ला पनि भएको बताउछन् । आधुनिक्ताले यत्ति धेरै फड्को मारिसक्दा यस्तो घटनालाइ स्वीकार्न पनि सकिदैन । तर घटना पछाडीका यथार्थ पहिल्याउन आबश्यक छ ।